TRUESTORY: “ရိုဟင်ဂျာ” အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထား
နေနဲ့ တခါတခါကျလို့ရှိရင် ပြတ်ပြတ်သားသားသိချင်တဲ့ ရပ်တည်မှုတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ သဘော ထားအမြင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိချင်တာလေးတွေ ရှိတယ်လေ။ အထူးသဖြင့် ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ လူမျိုးရေးဆိုင်ရာပဋိပက္ခတွေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့- နိုင်ငံတကာ
ကနေပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အစိုးရကနေ ဘင်္ဂါလီလို့ သတ်မှတ်တဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ “သူတို့ကိုယ်သူ တို့ရိုဟင်ဂျာ”လို့ ခေါ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့အရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထား ဘယ်လိုဆိုတာကို သိပ်ပြီးတော့ ပြတ်ပြတ်သားသား မသိရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး ရှိပါတယ်။ အလားတူပဲ။ ဒီ ….
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ အဲဒီတော့အစိုးရရဲ့သဘောထားဘယ်လိုဆိုတာကို ပြတ်ပြတ်သားသား သိကြရရဲ့လား။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ အစိုးရရဲ့သဘောထားကတော့ သူတို့ပြောတာက ဒီနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူး၊ အဲဒီတော့ ဘင်္ဂါလီပဲရှိတယ်-ဆိုတဲ့အမြင်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ တရားဝင်ကတော့ ဒါ အစိုးရရဲ့အမြင်ပဲလေ။ ဒါက အစိုးရရဲ့အမြင်ပဲ ဆိုတော့ တရားဝင်ဥပဒေက ဒီအတိုင်းပဲပေါ့။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ အဲဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတို့အနေနဲ့ရော ဒီကိစ္စကို အစိုးရသဘောထား
အတိုင်းပဲလား၊ တခြား ဟို…ညှိနှိုင်းမှုတွေ၊ ဒါမှ မဟုတ်လို့ရှိရင် ဆွေးနွေးမှုတွေ၊ တိုင်ပင်မှုတွေလုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ထင်သလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ ကျမတို့အမြင်က အဖြေရှာနိုင်ဖို့ပဲ။ ဒီအတိုင်းသွားလို့ ပြေလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီအတိုင်းပဲသွားစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ဒီအတိုင်းသွားလို့ မပြေလည်ဘူးဆိုလို့ ရှိလို့ရှိရင် ပြေလည်
တဲ့အဖြေတခုရှာရမှာပေါ့။ ဒီလို နာမည်တခုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ ကျမတို့ရဲ့ပြည်တွင်းမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဘာပဲပြောပြော၊ ဘယ်ကိစ္စကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဆွေးနွေးနိုင်ရမယ်၊ တိုင်ပင်နိုင်ရမယ်၊ ညှိနှိုင်းနိုင်ရမယ်။ အဓိက ဦးဆောင်ပြီးလုပ်ရမှာကတော့ အစိုးရအဖွဲ့ပဲ။ ဒီကိစ္စက အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ နိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေကို ရှာနိုင်ရမယ်။ ရှာရဲရမယ်။ ဒါက အစိုးရလုပ်သူများရဲ့တာဝန်ပဲ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ အဲဒီတော့ လူထုကြားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရော- ဒီလို အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ပုံစံမျိုးတွေ
ထွက်နိုင်တယ်လေ။ အဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့….
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ ကျမတို့ကတော့ အစိုးရဟာ ဘာအစွန်းရောက်တာမှ မကြိုက်ဘူး၊ လူမျိုးရေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာသာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေးဝါဒအယူအဆ အရပဲဖြစ်ဖြစ် အစွန်းရောက်တယ်
ဆိုကတည်းက မကောင်းတော့ဘူးလေ။ အစွန်းရောက်တယ်ဆိုတာကတော့ မစ္ဇျိမပဋိပဋာနဲ့တော်
တော်လွဲသွားပြီပေါ့။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ကတော့ အစွန်းရောက်မှုကို ဘာကိုမှ အားမပေးပါဘူး။